लगानी Archives ~ Page3of 14 ~ Banking Khabar
बैंकिङ खबर। वाणिज्य बैंकहरुले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कम्तिमा २५ प्रतिशत कर्जा लगानी गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । २५ प्रतिशतमध्ये कृषिमा १० र उर्जा तथा पर्यटन क्षेत्रमा कम्तिमा १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नु पर्ने व्यवस्था रहे पनि बैंकहरु भने तोकिएको सीमासम्म पुग्न सकेका छैनन्। असोज मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरूले कृषि क्षेत्रमा ६. ४ र उर्जा तथा पर्यटनमा
बैंकिङ खबर । रुपन्देहीमा रहेका विकास बैंकले कृषि क्षेत्रमा उत्साहजनक लगानी गरेका छन् । बैंकले गरेको लगानीबाट कृषिजन्य आयात रोक्न सघाउ पुग्ने र व्यापार घाटासमेत कम हुने विश्वास गरिएको छ । खासगरी पशुपालन, कुखुरापालन, मत्स्यपालन र तरकारी खेतीमा विकास बैंकले लगानी गरेका छन् । बुटवलमा रहेको साइन डेभलपमेण्ट बैंकका कार्यकारी प्रमुख प्रकास पौडेलले भने “मुलुकलाई
बैंकिङ खबर । सहयोगी विकास बैंक लिमिटेडले महिन्द्रा ब्राण्डको तीन चक्के टेम्पु (सवारी साधान) मा लगानी गर्ने भएको छ । सो सम्बन्धमा जनकपुरमा रहेको अशोक ट्रेडर्स र माहागणपति अटो सेल्स प्रा.लि. सँग संझौता सम्पन्न भएको छ । संझौतामा बैंकका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विनय रिजाल, अशोक ट्रेडर्सको तर्फबाट प्रोपाइटर आशिष शाह र माहागणपति अटो सेल्स
बैंकिङ खबर । एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेडले एक हजार रुपैयाँ अंकित दरका ४० लाख कित्ता ऋणपत्र निष्काशन गर्ने भएको छ । कुल चार अर्ब रुपैयाँ बराबरको “११% एनआई सी एशिया ऋणपत्र २०८५/८६” निष्कासनको लागि बैंकले नेपाल एसबिआई मर्चेन्ट बैंकिङ लिमिटेडलाई धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकका रुपमा नियुक्त गरेको छ । ऋणपत्र निष्कासन सम्बन्धी सम्झौतापत्रमा एनआईसी एशिया
पाकिस्तानको मन्त्रिपरिषदले तटीय सहर ग्वदरमा तेल प्रशोधन (रिफाइनरी) स्थापना गर्न साउदी अरबलाई स्वीकृति दिएको छ । “रिफाइनरी स्थापनाका लागि मन्त्रिपरिषदको स्वीकृतिले दुबै देशबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्न बाटो खुलेको छ,” पाकिस्तानका पेट्रोलियम मन्त्री गुलाम सरवार खानले बताए । यद्यपी, रिफाइनरी निर्माणमा हुने लगानी रकमबारे केही खुलाइएको छैन । मन्त्री खानले साउदी अरेबियाबाट पाकिस्तानमा हुने लगानीप्रति कुनै
बैंकिङ खबर । सोमबारदेखि विश्व लगानीकर्ता सप्ताह सुरु भएको छ । सर्वसाधारणलाई सेयर बजारमा प्रवेश गराउन सचेतना जगाउन सुरु भएको सप्ताह नेपाल धितोपत्र बोर्डले विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाउँदैछ । सोमबार बोर्डले प्रभात फेरि कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डको आयोजनामा सोमबार सम्पन्न प्रभात फेरिमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, मर्चेन्ट बैंकर, ब्रोकर तथा लगानीकर्ताहरुको
सरकारले पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माणको उपयुक्त ढाँचा तय गर्दै लगानीका लागि आवश्यक प्रक्रिया थाल्ने भएको छ । चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजले विगत सात वर्षसम्म आयोजनाले कुनै प्रगति नगरेको र पछिल्लो दिनमा आफैँ आयोजनाबाट बाहिरिने सङ्केत गरेपछि सरकारले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन, अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा र लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद
भारतको प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा ४० प्रतिशत बैंकिङ लगानी
रुपा कोइराला/बैंकिङ खबर । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी वृद्धिका लागि नेपालको केन्द्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकले बाध्यकारी व्यवस्था नै गरेको छ । कृषि, उर्जा, पर्यटन लगायतका उत्पादनमूलक क्षेत्रमा वाणिज्य बैंकहरुलाई कुल लगानीको २५ प्रतिशत लगानी गर्न निर्देशन दिइएको छ । नेपालको छिमेकी मुलुक भारतमा पनि निश्चित केही क्षेत्रमा बैंकिङ लगानीका लागि प्रोत्साहन गरिएको छ । भारतले
आगामी मार्च महिनामा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन हुने
बैंकिङ खबर । नेपाल सरकारले आगामी मार्च महिनामा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन गर्ने निर्णय गरेको छ । असोज २ गते बसेको लगानी बोर्डको ३२ औं बैठकले अन्तर्रा्ष्ट्रिय लगानी भित्राउन सम्मेलनको आयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो । नेपालमा हुन लागेको यो तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन हो । यसअघि, वि.सं २०४६ सालको राजनैतिक परिवर्तन पश्चात नेपालमा लगानी सम्मेलन
बैंकिङ खबर । नेपाली बैंकिङ उद्योगको इतिहासमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो कर्जा लगानीको आयोजना– होङसी शिवम् सिमेण्ट अब सफलतापूर्वक सम्पन्न हुने क्रममा पुगेको छ । नेपाली मुद्रा १६ अर्ब रुपैयाँको यस सामूहिक ऋण लगानी प्रोजेक्टमा एनएमबि बैंकको अगुवाईमा पाँच वटा बैंकले लगानी गरेका छन् । एनएमबि बैंकले छ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको प्रोजेक्टमा
बैंकिङ खबर । सहयोगी विकास बैंक लिमिटेडले हिरो ब्राण्डको दुई चक्के सवारी साधानमा लगानी गर्ने भएको छ । सो सम्बन्धमा महोत्तरीको बर्दिवासमा रहेको शान्ति अटो इन्टरप्राइजेजसँग संझौता सम्पन्न गरेको छ । बैंकका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विनय रिजाल र शान्ति अटो इन्टरप्राइजेजको तर्फबाट प्रोप्राईटर उदिप नारायण महतोले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । शान्ति अटो इन्टरप्राइजेजले
विदेशी पुँजी परिचालनका लागि वैकल्पिक लगानी कोष नियमावली तयार
बैंकिङ खबर । नेपाल धितोपत्र बोर्डले गैरआवासीय नेपालीसहित विदेशी लगानी ल्याउन बाटो खुला गर्ने तयारी गरेको छ । प्राइभेट इक्विटी र भेञ्चर क्यापिटल जस्ता वित्तीय औजारमार्फत् यस्तो लगानी परिचालन गर्न बोर्डले वैकल्पिक लगानी कोष नियमावली तयार पारी कार्यान्वयनका लागि सरोकारवालासँग छलफल समेत गरेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा विदेशी लगानी भित्राउन वित्तीय औजार
बैंकिङ खबर । शुक्रबारदेखि दुई जलविद्युत् कम्पनीले १८ लाख कित्ता सेयर निष्काशन गरेका छन् । माउन्टेन हाइ«ोले १२ लाख ५० हजार कित्ता सेयर निष्काशन गरेको छ भने घलेम्दी हाइड्रोले पाँच लाख ५० हजार कित्ता सेयर निष्काशन गरेको छ । दुवै कम्पनीले आयोजना प्रभावित स्थानीयका लागि सेयर निष्काशन गरेका हुन् । माउन्टेनले एक सय रुपैयाँ
रुपा कोइराला/रेखा चन्द । नेपाल राष्ट्र बैंकले उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बैंकिङ लगानी विस्तार गर्ने रणनीति अघि सार्दा बैंकहरु डराए । अनुत्पादक एवम् छिटो नाफा आर्जन गर्ने क्षेत्रहरुमा लगानी गरेर व्यवसायमुखी बन्दै गइरहेका बैंकहरु उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरेर आम्दानी गर्न कठिन हुने डरमा थिए । अझै पनि निजी क्षेत्रका बैंकहरुले केन्द्रीय बैंकको निर्देशनअनुसार उत्पादनमूलक क्षेत्रमा
माल्दिभ्स सरकारले मनोरञ्जन क्षेत्रमा हुने वैदेशिक लगानीको मात्रामा अंकुश लगाएको जनाएको छ । मालदिभ्सले स्थानीय लगानीलाई प्रेरितगर्न ठूलोमा मात्रामा हुने वैदेशिक लगानीलाई प्रतिबन्ध लगाएको सरकारी अधिकारीले बिहीबार जनाएका छन् । सो सरकारले हालै एउटा कानुन ल्याएर यस्ता कार्यक्रमहरूको व्यवस्थापन, मनोरन्जन र उत्पादनका क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीलाई नियन्त्रण गरेको छ । माल्दिभ्सका आर्थिक तथा विकास